Masuul ka Tirsan Maamulka G/Banaadir oo Muqdisho lagu dilay iyo xog laga helaayo? – War La Helaa Talo La Helaa
Akhriso: 48-saac gudahooda oo dhimashadii ugu badneyd ka dhacday Soomaaliya
Guddoomiye Cusub oo loo magacaabay degmada Xamar-weyne ee Gobolka Banaadir
SAWIRRO: Maxaad ka Ogtahay safarka R/wasaaraha Itoobiya ee dalka Qadar?
SAWIRRO: Taliyaha Ciidanka Booliska dalka Jabuuti oo soo gaaray Muqdisho+Ujeedka
FIIRSO: RW Kheyre oo ku calaan calay in Mushaarka Ciidamada DF oo ay bixin jireen…
LA YAAB+FIIRSO: Aabe Gabdhiisa sidii Xaaskiisa u heystay mudana u galmoonayay oo…
XOG CUSUB: Maxaadan Ogeyn oo ka cusub Kiiska muranka Badda Kenya &…
XOG XASAAASI AH: RW Kheyre oo ka hor yimid qorshe Farmaajo xilka kaga qaaday Yariisow…
Masuul ka Tirsan Maamulka G/Banaadir oo Muqdisho lagu dilay iyo xog laga helaayo?
By madoobe	 Last updated Jun 14, 2018
Xarunta Dowladda Hoose Ee Muqdisho
Shaaciye.com-Guddoomiye Waaxeed ka tirsanaa Maamulka Degmada Hawlwadaag ee Gobolka Banaadir, ayaa xalay fiidkii waxaa lagu dilay xaafada Shanta Geed ee degmadaasi, kadib markii ay rasaas huwiyeen niman bistoolado ku hubeysnaa.
Guddoomiye Waaxeedka la dilay oo magaciisa lagu soo koobay Jabloos ayaa waxaa la dilay xilli uu fadhiyay Maqaaxi lagu shaaheeyo oo ku taalla xaafada Shanta Geed, waxaana dilka kadib goobta ka baxsaday dableydii dilka geysatay.
Jabloos ayaa wuxuu maamuli jiray Waaxda Saqaawadiin, waxaana uu ahaa nin Oday ah oo si wayn looga yaqaanay Degmada Hawlwadaag, iyada oo dilkiisa ay aad u hadal hayaan dadka deegaanka.
Guddoomiyaha, ayaa waxaa la tilmaamay in si gaadmo ah ay ku toogteen raggii bistooladaha ku hubeysnaa, sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ah oo arkayay xilliga uu dilka dhacayay.
Ciidamada Dowladda federaalka oo durbaba ku baxay halka uu dilku ka dhacay, ayaa sidii caadada ahayd waxaa ay ku fashilmeen in ay gacanta ku soo dhigaan dableyda dilka geysatay.
Xoogaga Shabaabka u qaabilsan dilalka qorsheysan, ayaa xilliyada qaarkood waxaa ay dilal abaabulan ka gaystaan Caasimadda Muqdisho, iyada oo bishan Ramadaan ay kordhiyeen dilalka ay la beegsanayaan dadka kala duwan.
Xubin ka tirsan Ergada oo Muqdisho lagu dilay iyo Amaankii oo faraha ka baxay!
Dagaal Al-shabaab iyo Ciidanka DF Beledweyne ku dhex maray iyo xog laga helay?
Xuseen Madoobe	 Mar 19, 2019 0
LA YAAB+FIIRSO: Aabe Gabdhiisa sidii Xaaskiisa u heystay mudana u…
XOG CUSUB: Maxaadan Ogeyn oo ka cusub Kiiska muranka Badda Kenya…
XOG XASAAASI AH: RW Kheyre oo ka hor yimid qorshe Farmaajo xilka kaga…
FIIRSO: Aas Qaran oo loo sameynayo meydka Wasiirkii Dastuurka &…
DEG DEG+FIIRSO: Wasiirka arrimaha Dastuurka Xoosh Jibriil oo goordhow…
XOG+FIIRSO: Itoobiya oo runta ka sheegtay qodobadii looga hadlay…
XOG: Walaac & rajo intaba waa laga muujinayaa Go’aanka uu…
FIIRSO VEDIO: Madaxweyne Farmaajo & R/wasaaraha Itoobiya oo u…
DEG DEG: Ruusha & Qadar oo ka hadlay Xaalada amni ee Somalia…
FIIRSO: Madaxda DF oo lagu eedeeyay iney ku mashquushay dagaalka…
DEG DEG+FIIRSO: Raggii Kufsaday Caaisho oo gacanta lagu dhigay &…
XOG XASAASI AH: Wasiiro la saftay Kheyre,baraha Bulshadana ka…
XOG LA OGAADAY: Xeer ilaaliyaha Qaranka oo xayiray Akoonka lacagaha ee…
XOG XASAASI AH: Kenya oo ka naxday Go’aan halis oo Maxkamada ICJ…
XOG CULUS: Itoobiya oo Hub culus gacanta ku dhigtay & Xog laga…
FIIRSO: Ganacsatada Soomaalida ee Khaadka oo ku dhawaaqay iney…
FIIRSO: Al-Shabaab Qarax ugu xiraya gaariga mas’uul Dowladeed oo…